म्याग्दी पहिरो : एकाघरका ९ जनाको लहरै राखेर दाहसंस्कार, दागबत्ति दिनेसम्म कोही भएनन्
निशान न्युज असार ३०, 2077
म्याग्दी । अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा परेर म्याग्दीमा २८ जनाले ज्यान गुमाए । सोही घटनामा परी मृत्यु भएका वीरबहादुर नेपालीको परिवारका छ जनालाई दागबत्ती दिने घरका कोही पनि भएनन् ।
दुई भाइका परिवारका छ जनाको पहिरोले बगाएर मृत्यु भयो । एक जना भने गम्भीर घाइते भएर बाँचे । त्यही बस्तीमा निद्रामा रहेका ३१ जनालाई पनि पहिरोले बगायो ।
घुगंगा गाउँपालिका–६, ठाडाखानी, धवलागिरी–६, मराङ र मालिका–७, विममा गएको बाढी तथा पहिरोमा परेर बेपत्तामध्ये थप एक जनाको शव भेटिएसँगै मृतकको संख्या २८ पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । अहिलेसम्म २७ जनाको शव भेटिएको छ भने बिम र मराङमा भने अझै चार जना बेपत्ता रहेका छन् ।
मालिका गाउँपालिका–७, बिमका गौदेवी नेपाली, विशेष नेपाली, वीरबहादुर नेपाली, वीरबहादुरका तीन महिनाका छोरा, विष्णु नेपाली र सन्दीप नेपालीले पहिरोमा परी ज्यान गुमाए । पूर्णबहादुर नेपाली गम्भीर घाइते भए । उनको पोखरामा उपचाररत भैरहेको छ । आफ्नो र भाइ वीरबहादुरको सबै परिवारको मृत्यु भयो । उनले परिवारलाई जोगाउन खोज्दै गर्दा आफैँ गम्भीर घाइते भए ।
असार २६ गते बिहान ३ बजे गम्भीर घाइते भएका उनको २७ गते शनिबार दिउँसोसम्म छट्पटाएरै भग्नावशेषमा रहे । उनलाई बेनीका नारायण जिसीको पहलमा प्रभु एयरको हेलिकोप्टरले उद्धार गरी पोखरा पुर्याइयो । पहिरोमा परेर घाइते भएका दुईजना गर्भवतीसहित १३ जनालाई प्रभु एअर र नेपाली सेनाको एनआई सेभेन्टिन हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरेर बेनी, पोखरा र काठमाडौंमा उपचारका लागि पठाइएको छ ।
आफू घाइते अवस्थाको पीडाले छट्पटिइ रहेका पूर्णले आफ्नो परिवारका छ जनाको लास हेर्न र दागबत्तीसम्म पनि दिन पाएनन् । उनको परिवारको सबै सदस्यलाई दागबत्ती नाताले काका पर्ने एक जनाले दिए ।
बिमकै ४० वर्षीया विष्णु र चार वर्षिय बहिनी इच्छा गुमाएका १० वर्षीय बालक आफ्नो ठूलोबुबाको घरमा किरिया बसेका छन् । बहिनी र आमा गुमाएका बालकका बाबा सोमनाथ र उनी भने बिहान अलिक छिटो उठेर बाहिर निस्केकोले जोगिएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, म्याग्दीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घटनाको मुचुल्का बनाएर परिवारलाई हस्तान्तरण गर्यो । धौलागिरी गाउँपालिका–६ मराङको राम्चेमा मृत्यु भएका एकाघरका नौ जनाको एकै स्थानमा लहरै राखेर दाहसंस्कार गरिएको थियो । त्यस्तै मराङको बेँसीमा सात जनालाई एकै ठाउँमा लहरै र अर्का दुइ जनालाई अर्को ठाउँमा सँगै राखेर दाहसंस्कार गरिएको थियो । अर्को दिन भेटिएका एक जनालाई भने छुट्टै सदगद गरिएको थियो ।
बिमकी एलिसा केसी, मराङ कल्लेनीका जनिमा केसी, सबिन पुन र दुखुखोलामा बेपत्ता मालिका–६, दरबाङकी गीता रोका भने अझै नभेटिएको डिएसपी किरणाजङ्ग कुँवरले जानकारी दिए ।
धवलागिरी–६ को मराङ, कल्लेनी, राम्चे र रिखा तथा मालिका–७ को बिम, दुले र नुर्बाङमा पहिरो गएको हो । पहिरोमा परेर घाइते भएका छ जना बेनी अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्किएका छन् । पहिरोबाट मराङमा २०, बिममा १० र ताकममा पाँचवटा घरमा भौतिक क्षति पुगेको छ ।
आन्तरिक हवाइ उडान आजबाट सुचारु
काठमाडौं । कोरोना महामरीसागै गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले झन्डै ६ महीनादेखि ठप्प रहेको मुलु...
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघको बैठक सम्पन्न, रिक्त विभिन्न पदहरुमा मनोनित
काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालको केन्द्रिय समितिको बैठक आइतबार सम्पन्न भएको छ । केन...
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहँदा खुलेका सार्वजनिक यातायातमा आवतजावत गर्न जो...
पेरिसडाँडाबाट बालिका खड्का प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । आफूलाई पटक पटक प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यौन हिंसा गरेको आरोप लगाउने बालिका...
काठमाडौँ । कोभिड–१९ को सङ्कटका बीच तनहुँको बन्दीपुरमा निर्माणाधीन बन्दीपुर केबुलकारको कामले गति ल...
पाक्न थाले जुम्ली मार्सी धान
काठमाडौँ । जुम्लामा मात्र उत्पादन हुने जुम्ली मार्सी धान यतिबेला यहाँका खेतमा पाक्न थालेको छ । वि...
आज भदौ ३ गते शनिबार, श्री शनिदेवको दर्शन गर्दै हेर्नुस् आज यस्तो छ तपाईको राशीफल
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)सम्मान प्राप्त हुनेछ । साहित्य लेखनमा रुचि बढ्नेछ । पराक्र...
आज असोज ५ गते सोमबार, शिव भगवानको दर्शन गर्दै हेर्नुस् यस्तो छ आजको राशीफल
आज असोज २ गते शुक्रबार, महालक्ष्मी माताको दर्शन गर्दै हेर्नुस् यस्तो छ आजको राशीफल
यौन आनन्दका लागि बाँदरले यसरी लैजान्छ अर्काकी श्रीमति
आज कुन जिल्लामा कति जना कोरोना संक्रमित थपिए ? (जिल्लागत सूचीसहित)
अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको पहिलो प्रमुख आयुक्त सिंहको निधन
आज भदौ महिनाको अन्तिम दिन ३१ गते बुधबार, भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्दै हेर्नुस् यस्तो छ आजको राशीफल
एक छाक खान थाल बोकेर खुल्ला मञ्चमा धाउनेलाई खोई संविधान ?
असोज १ गतेदेखि लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक उडान खुल्ने, हवाई यात्रामा पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य
कोरोनाको ‘हटस्पट’ बन्यो काठमाडौं : कुन क्षेत्र बढी प्रभावित छ ? (क्षेत्रसहित)